Warsangeli Waqooyi iyo Warsangeli Koonfuureed | allsanaag
Warsangeli Waqooyi iyo Warsangeli Koonfuureed
Warsangeli Waqooyi iyo Warsangeli Koonfuureed waxa ka dhaxeeya wax ka weyn Hartinimada iyo Warsnagelinamada ay wada yihiin.
Halqabsiga guuurowga Laashin Xuseen Weershe, arag fiidiyowga hoose, oo ah “Warsangeli Caleed” wuxu ku saleysan yahay asalka meesha Warsangeli Abgaal ka soo jeedo oo ah CAL amd CAL-MADOW.
Waayeelka Abgaal Warsangeli waxa hal ku dhig u ah “Awoowgey Warsangeli Caleedoow” oo ah hadal ay ku dhawaaqaan markay asalka odeygooda tilmaamayaa. War
← Xafiiska laga maamuli doono Duulista Hawada dalka. Reerkiina Xassad baa Haya →